A hụrụ m gị n'anya in English. A hụrụ m gị n'anya Meaning and Igbo to English Translation
Home>Words that start with I>I love you>a hụrụ m gị n'anya (Igbo to English translation)
What does a hụrụ m gị n'anya mean in English? If you want to learn a hụrụ m gị n'anya in English, you will find the translation here, along with other translations from Igbo to English. We hope this will help you in learning languages.
Here is a hụrụ m gị n'anya meaning in English:
atụ anya na a na nwa
Ị mere ihe ziri ezi
Ị na-na na m ezigbo nwaanyị
Ị na-na na m sweetie
M na-aga ezumike echi
Nke otu n'ime ha?
Ọnọdụ mmụọ ọjọọ